TOYOTA VELLFIRE 2012 အား ရန်ကုန် တွင်​ ipivi.com မှတဆင့်​ ဝယ်​ယူပါ။
ရောင်းချသူ: Ko Chan
Toyota Models Vellfire
TOYOTA. VELLFIRE 2012model. လေးရောင်းခွင့်ပြုပါ အတိုက့်ခိုက့်မရှိ့လုပ့်စရာမလို့ ပါ လက်တင်စီလို့ရပါတယ် ထိုင်ခုံမော်တာ လယ်ဇာဇိ စမ်နု မိုးနု ခါးTV camera 3လုံး ပါဆက်ထိုင်ခုံး 5.1 m အလယ်လျှောက်လမ်း ရွတ်တာအကုန်ပါတယ် grade full. ခရီသွားအဆင်ပြေ နယ်ဝေ မြို့တွင်သွားရတာအဆင်ပြေပါ စိတ်ဝင်စားရင်ဖုန်းဆက်ပေးပါ မော်ဒယ်အမြင့်လေးနော် 1200ခေါ်ဈေးပါ အမှန်တကယ်ဝယ်ယူသူကိုဈေးညှိရောင်းပေးမည်။ 09794171173 viber 09794171172 call phone.
Aung myo paing အသေးစိတ်ကိုမေးမြန်နိုင်ပါတယ် ..ကျေးဇူး တင်ပါတယ် 1P **** ရန်ကုန်လိုင်စင်းကီလိုနဲးပြီ လိုင်စင်အသစ်တာယာအသစ် ကားအသစ်...... 3.5ccအင်ဂျင်ပါ
အမည်: TOYOTA VELLFIRE 2012